Mareynkanka Oo Amray In Baaritaan Cusub Lagu Sameeyo Weerarkii Bariire – Hornafrik Media Network
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa dalbaday in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo dadkii lagu dilay howlgal bishii August ee sanadkan ay deegaanka Bariire ka sameeyeen Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Col Mark Cheadle oo Afhayeen u hadlay howlgalka Mareykanka Qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in taliyaha ciidamada AFRICOM General Thomas Waldhauser uu weydiistay waaxda baaritaanada dambiyada in ay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan weerarkii ka dhacay deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Warkan ayaa imaanaya, kadib markii ay soo baxeen warar uu helay taliska AFRICOM oo ku aadan in dadkii lagu dilay Bariire ay dhamaantood ahaayeen Rayid Beeraley oo ay Caruur ku jireen.
Labada sarkaal ayaa codsaday in la sameeyo baaritaan Sax ah, si loo ogaado Xogta dhabta ah ee ku aadan weerarkii ka dhacay deegaanka Bariire oo mareykanka ay sheegeen in ay halkaasi ku dileen dagaalyahanno ka tirsanaa Al Shabaab.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa hore u sheegay in howlgalkii ka dhacay deegaanka Bariire lagu dilay 10 ruux oo ahaa beeraley oo ay ku jireen Caruur iyo Haween.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya, tan iyo markii talada dalkaasi uu la wareegay Madaxweyne Donald Trump
Dowladda Somalia oo Shaacisay Khasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay Qarixii Dugsiga Gen Kaahiye